ओलीे र ‘रअ’ प्रमुख अनिलबीच भेटवार्ता हुँदै ! विदेशी भूमिमा मात्रै भेट्‍न-यो कस्तो राष्ट्रवाद ? — OnlineDabali
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य जाँचको लागि भन्दै बुधबार दिउँसो बैंकक उडेका छन् । जहाजमा चढ्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओलीले अाफ्नो स्वास्थ्यमा खासै समस्या नभएको तर नियमित जाँचको लागि जान लागेको बताएका थिए ।
केही दिन बिरामी भन्दै पार्टी एकतादेखि सबै राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित गरेर ओली घरमै बसेका थिए तर विमान स्थलमा कुनै समस्या नभएको भन्दै धेरैले बिरामीको बहाना गरी ओलीले बालकोटमा केही नयाँ पापड पेलेको हुन सक्ने अाशंका पनि गरेका छन् ।
हुन पनि केपी शर्मा ओली बैंकक उड्नुको एक दिन पहिले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख अनिल धसमान पनि बैंकक पुगिसकेका थिए । अनिल मंगलबार दिल्लीबाट बैंकको लागि उडेका थिए ।
स्रोतका अनुसार अाज (विहीबार) साँझ ओली र अनिलबीच भेटवार्ता हुँदैछ । त्यसको लागि समय तय भइसकेको तर गोप्य राखिएको छ ।
चुनावको परिणामसँगै नेपाल अाएका अनिल लामो समयसम्म काठमाडौंमै बसेर विभिन्‍न राजनीतिक भेटवार्ता गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निवास धापाखेल पुगेका अनिलले प्रचण्डसँग करिब १ घण्टा समय बिताएका थिए । अनिलसँगै प्रचण्ड निवासमा काँग्रेस नेता अमेरशकुमार यादव र राजपाका नेता राजेन्द्र महतो पनि पुगकेा थिए । उनीहरुलाई साँचि राखेर अनिलले काँग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्न‍ प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रचण्डले तत्कालै त्यो गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले स्वास्थ्यमा खासै समस्या नभएको बताउनु तर लामो बैंकक बसाई तय गर्नु र रअका प्रमुख त्यही हुनुलाई नेपाली राजनीतिको लागि महत्वपूर्ण टर्निङको रुपमा हेरिएको छ । अाजको भेटमा खासै कुराकानी नहुने स्रोतका दाबी छ ।
अनिल नेपाल रहँदा भेट्ने प्रयास गरेका थिए तर ओलीले मानेका थिएनन् तर नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीसँग बिरामी भएको भनिएको बेला नै ओलीले भेटेका थिए । नेपालमा नभेट्‍ने तर विदेशी भूमिमा नेपालको राजनीतिबारे छलफल गर्ने ओलीको राष्ट्रवादको सामाजिक संजालहरुमा विरोध हुन थालेको छ ।
ओली एक हप्तासम्म बैंकक बस्ने र रअका प्रमुखसँग पनि भेट्‍ने खबर पाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चिन्तित बनेका छन् । अब ओली कुन मुडमा नेपाल फर्किने हुन सजिलै भन्‍न नसकिने माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।
बैंकक जानुअघि बसेको स्थायी समिति बैठकमा ओलीले अाफूले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै नछोड्ने संकेत गरेको एमाले नेताहरु नै बताउँछन् । एमालेका अधिकांश नेताहरु एकताको पक्षमा छन् । उनीहरुले चार विकल्प अगाडि सारेका छन् ।
पहिलोः ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव बादल वा नारायणकाजी श्रेष्ठ । यो पार्टीको सिद्धान्त, सांगठानिक हैसियतका आधारमा यही विकल्पमा एमालेमा जोड गरेको छ । ओलीले जबजबाट तलमाथि हुन नसक्ने संकेत समेत गरेका छन् ।
दोस्रोः यसमा माकेले नमान्ने संकेत गरेपछि एमालेका केही नेताहरुले ओली र प्रचण्डलाई सहअध्यक्ष र दुई महासचिव बनाउने विकल्प अगाडि सारेका छन् । विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने, त्यतिबेलासम्म यसरी नै पार्टी संचालन गर्न सकिने नेताहरुले अगाडि सारेका थिए ।
यो विकल्पमा गए दुबै पार्टीलाई सम्मानजनक हुने र कार्यकर्ता र जनतामा राम्रो सन्देश जाने भन्दै एमालेका केही नेताहरुले यो विकल्पलाई छलफलमा ल्याएका छन् । यसको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पनि आधा आधा कार्यकाल हुने गौतमको तर्क छ ।
तेस्रोः माओवादी केन्द्र अध्यक्ष नपाए एकताबाट पछी हट्न सक्ने अवस्थामा एमालेले अध्यक्ष पद छोड्न पनि तयार हुनेपर्ने नेताहरुले बताएका छन् । एमालेको चुनावपछिको पोजिशनमा माकेसँगको एकताको ठूलो भूमिका रहेको बताउँदै केही नेताहरुले जसरी पनि एकता गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
त्यसको लागि प्रचण्ड अध्यक्ष, महासचिव एमालेको हुने र प्रधानमन्त्री ओली हुने विकल्पबारे पनि एमालेभित्र छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
चौथोः एमाले सचिव योगेश भट्टराई लगायतका पूरानो मालेका युवा नेताहरुले ओली र प्रचण्ड बाहेक दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर भएपनि एकताको पक्षमा देखिएका छन् । भट्टराईले त सार्वजनिक कार्यक्रममै ओली र प्रचण्डले एकतापछि सन्यास लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यो विकल्पले पार्टीभित्र छलफलको रुपमा प्रवेश पाएको छैन । यसको लागि केही नेताहरुले लविङ गरिरहेका छन्
सुनचाँदीको मूल्य बढ्‍‍यो